IBravo: Thwebula Ubufakazi Bevidiyo Ku-inthanethi | Martech Zone
IBravo: Thwebula Ubufakazi Bevidiyo Ku-inthanethi
ULwesine, April 26, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Amasayithi amaningi angahlomula ngobufakazi bevidiyo noma ngokubeka ikhasi lapho amakhasimende angaqopha umyalezo wevidiyo wenkampani. Kodwa-ke, ukuthwebula, ukulayisha nokusingatha lawo mavidiyo kungaba buhlungu impela. Bravo uthemba ukukushintsha lokho ngensizakalo yabo entsha, okuvumela amakhasimende akho ukuthi arekhode nge-webcam yawo futhi ayisingathe ekhasini lokufika ngokwezifiso lakho!
Nakhu ukubuka konke kwensizakalo:
Nayi isevisi echazwe yisayithi le-Bravo:
Sakha ikhasi lakho lokufika kwevidiyo - I-Video Portal yethu esebenziseka kalula ifaka uphawu lwakho futhi ivumela izethameli zakho zazi ukuthi ungathanda bathini.
Izithameli zakho ziqopha amavidiyo abo amasekhondi angama-30 - Amakhasimende akho noma amathemba akho angarekhoda ngokushesha imiyalezo yabo, ukuphawula noma imibuzo ngemizuzwana besebenzisa i-webcam yabo.
Buka futhi wabelane ngamavidiyo akho noma yikuphi kuwebhu - Sabalalisa ithonya lakho elisha kuwebhusayithi yakho noma ngezokuxhumana. IBravo ikuvumela ukuthi uqale wenze i-web yakho ibe ngeyakho, imizuzwana engama-30 ngasikhathi.
Tags: ubufakazi bamakhasimendeukubuyekezwa komkhiqizoividiyo eyenziwe ngumsebenzisi
Uhambo lwe-imeyili oluya ebhokisini lokungenayo
Kungani Ungazi Ukuthi Ngingubani?
May 1, 2012 ku-4: 36 AM
Okuthunyelwe okunjalo okuwusizo
May 7, 2012 ku-8: 29 PM
Kubukeka sengathi ukuncintisana kobufakazi bevidiyo yamakhasimende kuyashisa. Ngithole inothi elivela kwisevisi entsha, ebizwa ngeCrowdrave enikeza insizakalo efanayo.